Umntu akakwazi ukwenza yena elilungisa.
Xa iBhayibhile ithi ukuba umntu uyagwetyelwa, oko kuthetha ukuba ivela kuThixo avakaliswe elilungisa, ukhululekile, wakhululwa kuso yamatyala isono sakhe iwela uYesu Kristu. Lowo obagwebelayo uThixo ngokwakhe.
Iingqiqo elungile nobulungisa ukuyenza ngokupheleleyo amagama ngundoqo ukholo lwamaKristu. Ilizwi izizathu inguqulelo Swedish iBhayibhile iguqulelwe kwisicatshulwa lantlandlolo lesiGrike, "dikaíoo", eli gama kwisenzi kuthetha ukuba baxele umntu omsulwa ngokusemthethweni. Umntu ugwetyelwe wetyala analo. Unga ukuthelekisa ingqiqo xa yijaji okanye umgwebi enkundleni lichaza ezinye "akanatyala".
Umntu akakwazi ukwenza yena elilungisa. UPawulos ubhala ngo-2 kwabaseKorinte 5:18, 19
"Yonke into iphuma kuThixo, owasixolelanisa naye ngokwakhe ngoYesu Kristu, wasinika ulungiselelo loxolelaniso. Kuba uThixo waye ekuKristu, elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi. Yena, zamadoda izono zabantu, yaye uye walimisa kuthi ilizwi loxolelaniso. "
"Hinkwavo va dyohile, naswona va basilelela eluzukweni lukaThixo, yaye begwetyelwe ngesisa ukuba ndiyibize kuyo ngalo ubabalo lwakhe, ngokuba uKristu Yesu umhlawulele kubo." Roma 3:23, 24
Esinye seziphumo zoku yokugwetyelwa ngokholo kukuba sibe nolwalamano oluhle noThixo.
"Ngoko, sigwetyelwe nje ngokwaselukholweni, sinoxolo kuThixo ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu." Roma 5: 1
Kuyinto kuphela ubabalo efika ngokuphathelene isizathu
"Ke siyazi ukuba akagwetyelwa umntu ngokwasemisebenzini yomthetho, kuphela kungokukholwa kuYesu Kristu: sithe ke nathi aba sakholwa kuKristu Yesu, ukuze sigwetyelwe ngokwasekukholweni kuKristu, kungabi ugcina umthetho. Kuba ngokwasemisebenzini yomthetho omnye ungabi zizizathu. "Galati 2:16
Le ukugwetyelwa kucacile nolunyanisekileyo ekufeni kukaYesu, Noko ke, kufuneka ukuba zamkelwe ngokholo lo ngamnye ukukhonza usindiso / ukugwetyelwa ngenxa yakhe.
Ngako oko ke akukho-nganye Automatic-usindiso. Nceda uqaphele oku kubalulekile!
Ngowe-2 kwabaseKorinte 5:20, 21 sifunda oku, "Sizizigidimi ke ngoko ngenxa kaKristu. Kuba uThixo uniyala yakhe ngathi. Siyakucela ngenxa kaKristu , manixolelaniswe naye uThixo. Lowo ungazani nasono, uThixo endaweni yethu wamenza isono, kuba thina sibe bubulungisa bukaThixo kuye. "
Nokuba kwiTestamente eNdala, sifunda yokugwetyelwa ngokholo. Zombini 1 Eksodus 15: 6, Roma 4: 3 kunye Galati 3: 6 ikuthethayo uAbram (= uAbraham) indlela wakholwa kuThixo, nendlela oko kwabalelwa kuye ebulungiseni. E Roma 3:21, 22, uPawulos uthi Ngoku ke kubonakaliswe ubulungisa bukaThixo, ityhileke kubani na, ukuba umthetho nabaprofeti ungangqini ubungqina, ubulungisa ke bukaThixo, obungokukholwa kuYesu Kristu, bube bobabo bonke abakholwayo. Sibona kule ndinyana ngendlela umthetho nabaprofeti kwakusele ngaphambili kwangaphambili ukugwetyelwa ngokholo kuYesu Krestu. IBhayibhile isixelela ngendlela asiyi sigwetyelwe nje ngokwaselukholweni kuYesu Kristu, kodwa malunga nendlela yena uba ubulungisa bethu! UYeremiya 23: 6 UYeremiya 33:16 ithetha leNkosi ukulunga yethu. UPawulos uthi ngo-1 kwabaseKorinte 1:30
Ukuphelisa le posi nale irhafu sibhengezo iNkosi, uMsindisi uYesu Kristu.
"Nangona esebumeni bukaThixo, akazange acinge ukulingana noThixo Umvuzo kodwa wazinikela ngokuthi sizithathele ikhoboka waba yindoda. Wafumana ngayo njengoba wazithoba ngokwakhe umntu waza waba wesa ekufeni - ukufa nokuba emnqamlezweni. Ngenxa yoko UThixo wamphakamisela waza wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama, ukuba ngegama likaYesu onke amadolo agobe, awabasemazulwini, nawabasemhlabeni, nawabaphantsi komhlaba, yaye zonke zivume kuThixo uYise imbeko ukuba uYesu Kristu yiNkosi "Filipi 2:. 6-11.